Wareegii 12ka Xaafadood ee Kediska SBC oo caawa soo gaba gaboobay – SBC
Wareegii 12ka Xaafadood ee Kediska SBC oo caawa soo gaba gaboobay
Waxaa caawa soo gaba gaboobay tartamada wareegii 12ka xaafadood ee kediska Bisha barakeysan ee ramadaan oo ay u qabato xaafadaha Deegaanada Puntland Hay’ada warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC International.
Caawa ayaa waxaa is arkay Afartii xaafadood ee ugu dambeeyay wareegan, kuwas oo kala ahaa, Laanta Hawada Boosaaso Vs Xorgoble Qardho iyo weliba Raf iyo raaxo Boosaaso Vs Qoryacad Qardho.
Waxaa horeyay kulanka Xaafadaha Laanta Hawada Boosaaso Vs Xorgoble qardho, waxaana kulankaasi uu ku soo dhamaaday xaafada Laanta hawada Boosaaso oo ka hartay Tartanka iyo Xaafada Xorgoble Qardho oo u soo baxday.
Dhibcaha: Laanta Hawada Boosaaso 11-14 Xorgoble Qardho
Ka dib tartankaasi oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa daqiiqado ka dib bilaabatay tartanka Xaafadaha Raf iyo raaxo Boosaaso Vs Qoryacad Qardho.
Tartankaasi ayaa waxaa iyana ku soo baxday xaafada Qoryacad Qardho halka xaafada Raf iyo raaxo Boosaaso ay ka hartay tartanka .
Sidaasi waxaa wareega sedaxaad ee Tartanka Kediska SBC u taagan 6da xaafadood ee kala ah.
Xaafada Biyo Kulule Boosaaso
Xaafada Hodan Garoowe
Xaafada Waaberi Garoowe
Xaafada Qoryacad Qardho
Xaafada Xingood Qardho
Xaafada Xorgoble Qardho
6dani Xaafadood ayaa waxaa lagu wadaa in qori tuur loo sameeyo Hadii alle Idmo Maalinta Berito ah 9:30 subaxnimo xiliga Geyska Africa
Yaa is gaaray waan sugaynaa hadaanu nahay bahda qurba joogta
cabdulaahi abshir says:
anagoo ah xaafada onkod dangorayo kulanka is araga wareega 2aad ee caawe ee aan laqadan doono xaafada xorgoble qardho waxaan rajaynaynaa inaan cirka ufiirin doono aana udhigi doono cashar aysan ilaawin ilaa iyo inta uusocdo barnaamijka kadiska sidoo kale taageerayaashayada sharafta leh ee nagu taageera cilmiga iyo aqoonta ay na dheeryihiin waxaan urajaynayaa inay ka raali noqdaan tartankii lasoo dhaafay ee aan laqaadanay 1da luulyo taas oo ay nagu timo cilad farsamo balanteenu waa udabal daga koobka bisha barakaysan markaan kasoo laabano boossaso.